Warar - Maxaynu u dooran karnaa Filimkeenna Fududeynta Plywood iyo LVL Scaffold Plank?
1, Filimku wuxuu la kulmay plywoodwaa qafiif, u adkaysata weerarka daxalka iyo biyaha, oo si fudud loogu daro walxo kale isla markaana fudud in la nadiifiyo lana jaro. Ku daweynta filimka soo wajahay geesaha plywood-ka rinjiga biyuhu wuxuu ka dhigayaa mid aad u biyo-badan oo u adkaysta xirashada. Cimri dhererkiisa iyo dusha si fudud loo maareeyo awgood waxaa loo isticmaali karaa jawiga furan dhismaha iyo dhismaha.
Dahaarka filimku wuxuu wajahay plywood filimmo tayo sare leh oo soo dejin ah waxay hubinaysaa adkaanta iyo adkeysiga waxyeelada.
Dusha sare ee filimka lagu soo rogay plywood waa nadaafad iyo u adkaysiga saxaro adag.
Waxaa loo isticmaali karaa xaaladaha hoos u dhaca kuleylka, saameynta qoyaanka, nadiifinta saabuunta iyo waxay ka ilaalin kartaa termit.
Waxaan bixinaa laba nooc oo filim ah oo soo wajahay plywood. Filimkii ugu horreeyay ee loo yaqaan 'bjchrk' wuxuu wajahay plywood kaas oo aad ugu adkeysanaya biyaha, si sahlan loo nadiifin karo loona jari karo waana mid ka mid ah kuwa adduunka ugu tayada wanaagsan plywood's. Noocan plywood-ka sidoo kale waa fududahay in la nadiifiyo oo la jaro waana ka jilicsan yahay kana fudud yahay filimka bjchrk ee soo wajahay plywood.
2, Waxyaabaha: Qaab dhismeedka alwaaxa dahaarka leh (LVL)
Heerarka: AS / NZS 4357 Qaabdhismeedka alwaaxa dahaarka leh qaab dhismeedka GB / T 20241- 2006 Halbeegga loogu talagalay alwaaxda dahaarka leh ee ANSI A10.8 - 2001, Shuruudaha Badbaadada ee Iskuxidhka OSHA, Badbaadada Shaqada & Caafimaadka, US Waaxda Shaqada, Xeerarka (Heerarka - 29 CFR) Qeexitaannada Iskaraabka - 1926 Qeyb hoosaadka L, Lifaaqa A BS 2482 Qeexitaan loogu talagalay Guddiyada looxyada Scaffold
Miisaanka culus oo waara (waa miisaanka ugu fudud ee alwaaxa isku xardha alwaaxda suuqa), looxdhiska iskudhafku waa mid si xasilan u deggan oo kharashkiisuna sarreeyo. Qiimayaasha leexashada ee kor loo qaaday waxay u oggolaanaysaa darajooyin aad u ballaaran oo nabadgelyo ah iyo cilladaha soo jireenka ah ee looxyada adag lagu tirtiray. Looma baahna dhejis dheeri ah, yaraynta dayactirka iyo arrimaha dayactirka.
Guryaha looxa LVL Scaffolding
1. cimri dherer iyo badbaado sare loo qaaday (OSHA)
Qalafsanaanta qaabdhismeedka, xasiloonida iyo xoogga
3.Waxaa la hubiyaa ugu yaraan laba jeer inta u dhiganta alwaax adag
4.10% wuu ka fududyahay qoryaha adag ee u dhigma
5. No looma baahna band dhamaadka birta
6. Dayactir soconaya ama dayactir dib looguma baahna
Guryaha fiican ningax koronto
Waxyaabaha wanaagsan ee ka hortagga-kiimikada iyo kiimikada
Codsiyada & faallooyinka:
Waxaa loo adeegsaday meeshii looxyada wax lagu qoro ama alwaaxda caadiga ah. Qoryaha LVL Scaffold waa kuwo la awoodi karo, adag oo waara, gaar ahaan kuwa neerfayaasha wax cunaya. Daabacidda dhammaadka wax emulsion waxay yareysaa soo gelitaanka qoyaanka. Alwaaxda waxaa laga soo qaatay dhir FSC la aqoonsan yahay taas oo macnaheedu yahay inay waari karto. Looxa loo yaqaan 'LVL Scaffold' waa kuwo waara oo leh cimri dherer aad u dheer, sidoo kale waa kuwo fudud oo fudud in la maareeyo.